Abaningi iphupho ukumamatheka ezazingabizwa umxhwele interlocutors. Ukuze wenze lokhu, kudingeka babe namazinyo amahle, iqonde nomhlophe. Hhayi ngaso sonke isikhathi zingabantu nje ngokwemvelo. Kodwa sibonga ubuchwepheshe zakamuva kanye nentuthuko kufanele uwukwenza ingafinyelelwa ihhovisi yamazinyo. Sondeza-mhlophe, ukubuyekezwa zazo ezimweni eziningi ezinhle, isibe zithandwa kakhulu eminyakeni yamuva, naphezu kwezindleko yaso ephezulu. I-agumenti main - baqiniseka ephephile amazinyo. I izinhlelo nezindlela eziye zasetshenziswa kuze kube muva nje, ayikwazanga ukuziqhayisa isici okufana (ngaphandle laser mhlophe). Kodwa izinto ziyashintsha, si athuthukile ne entsha, ubulungu jikelele. Yiziphi izinzuzo mhlophe enjalo okuzoxoxwa ngazo esihlokweni.
Mhlophe Zoom, ukubuyekezwa zazo sibuyekezwe yithi, kuba bayindlala kakhulu. Lonke iphuzu ubuchwepheshe nokuphepha yayo. Inqubo siqukethe ekusebenziseni ijeli ekhethekile amazinyo eziyisisekelo (10 top, 10 ngezansi). Izindlela isakhiwo kuhlanganisa i-hydrogen peroxide. Ukuze kusebenze inqubo kudinga ukukhanya ekhethekile, imisebe yalo ithunyelwa umlomo lesiguli. Ngemva kwalokho, ijeli iqala ukufudumeza kanye ukungena izicubu ngezinyo, zombala ubhujiswe.
Emva inqubo, ungakwazi ukubuka umbala wemvelo elimhlophe koqweqwe lwawo. Inqubo Pass kungcono emitholampilo efakazelwe yamazinyo, kubalulekile ukuthi udokotela waba nokuhlangenwe nakho namakhono afanele. Umthelela kuyinto emangalisa ngempela, ngempela inqubo, okuyinto ethatha cishe ihora ukuba babe namazinyo kahle mhlophe.
Ukuze uthuthukise amakhorali kuyadingeka ukuze kwenziwe ukuhlolwa owandulelayo ngalo ingaphakathi ngomlomo. Uma kukhona izimbotshana noma amazinyo ingelashwa abathintekayo pulpitis, akunakwenzeka ukuba sifeze inqubo.
Ukuze uqonde uhlobo amakhorali
Amazinyo mhlophe Sondeza uhlelo, ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi omuhle, kuwufanele imali eningi, ruble mayelana 18,000 inqubo. Abantu bakholelwa izinto eziningi:
Sondeza 1. Gel kuyinto sasivumela yisikhathi, izazi ziye kungase kutholakale, akuphephile ngokuphelele. Iziguli babonakala kokunikezwa kwe-koqweqwe lwawo izinyo.
Sondeza 2. Okuningi gel eziphambili, kodwa, nokho, le nqubo kwakubuhlungu. Iziguli imakwe hypersensitivity of izinyo koqweqwe lwawo ukuze lokushisa.
Sondeza 3. okusha kulayini gel wakwenza lokhu Inqubo kobuhlungu ngokuphelele, futhi okubaluleke kakhulu, friendly. Odokotela batusa ukusetshenziswa lolu hlobo amakhorali. Ngisho naphezu kwezindleko nomsebenzi omkhulu, kuba nezinqubo ethandwa kakhulu emahhovisi kwamazinyo.
Sondeza - ikhaya amakhorali. Yiqiniso, ekhanyisa ngokugcwele amazinyo akho ngeke isebenze, ngoba akusiyo isibani ekhethekile isetshenziswa. Kodwa, noma kunjalo, ku-4-6 shades zingaba mhlophe. Lo mbono uphinde udinge ijeli ukusetshenziswa. Abakhiqizi ukunikela ongakhetha ezimbalwa ukuthi lokuhlushwa i-hydrogen peroxide: 4% kanye no-6%.
Ikhaya amakhorali Zoom, ukubuyekezwa lapho omuhle kakhulu, futhi zithandwa kakhulu, futhi kuba nezindleko hhayi kuphela ongaphakeme, kodwa futhi kwaba nemiphumela emihle.
Ukukhetha izinhlobo amakhorali, yebo, ngingathanda ukuzwa umbono odokotela, ababhekene nezimo izinqubo ezifanayo nsukuzonke. Izeluleko zabo ezinhle ukusiza iziguli ukwenza ukukhetha okufanele. Sondeza Amazinyo mhlophe 3 (izibuyekezo, izithombe kukhona esihlokweni) elisetshenziswe kaningi. Ijeli akunjalo kudala bavele emakethe Russian, kodwa nakanjani ukhululiwe uqobo. Kukhona ezinye izici lobu buchwepheshe. Phakathi kwabo kukhona:
Ijeli kanye isibani kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza eyodwa eqinile. Kuphela inhlanganisela anika yalokho emangalisayo.
Abakhiqizi zithuthukise isibani, okuyinto asetshenziswe amakhorali. Sinenkosi isikhathi esifitjhani wokusebenza, kuba ngokuphelele ayinangozi.
Ijeli empeleni emnene. I lokuhlushwa i-hydrogen peroxide akuyona abangaphezu kuka-25%. Umthelela ngokushesha okuqaphelekayo, kanye koqweqwe lwawo engumqemane.
Isicelo esisha gel ifomula athuthukile. Manje, izingxenye zalo eziyinhloko e imijovo ezahlukene. Lapho usebenzisa izingxenye kukhona okuxubile, kodwa acid ngeke kuyilimaze koqweqwe lwawo ngezinyo, njengoba neutralized. Lokhu kubaluleke kakhulu, yingakho lolu hlobo mhlophe kubhekwa ibe mnene.
Ngaphambi nangemva inqubo, ochwepheshe zisebenzisa Relief gel oluqinisa koqweqwe lwawo izinyo nezicubu.
Izibuyekezo Zoom-mhlophe mayelana nokuthi iziphi izinhlelo odokotela akhayo, kumlethela umphumela ekhexisayo. Ungakwazi bayakhohlwa inqubo kabusha engu-2. Kulokhu, amazinyo kuyoba elimhlophe-uqine.
Nokho odokotela bakhathazekile kwenhloso indlela kulabo iziguli bani ubunjalo koqweqwe lwawo has a kwe-tint aphuzi. Ochwepheshe ukukuqinisekisa ukuthi kuba okuqinile kakhulu futhi isikhathi eside. A ikani mhlophe ukonakalisa izici idatha.
Nguwena ngaso sonke isikhathi isiguli, odokotela bamazinyo ungakwazi kuphela ukweluleka noma ukuncoma. Uma unquma mhlophe amazinyo akho, zisebenzisa izindlela zesimanje. Akubalulekile ukuba ulondoloze imali le nqubo.
Ngemva iklayenti ukucacisa uhlobo mhlophe, ke uphakamisa lo mbuzo: "Kwenzeke kanjani le nqubo," Phela, iningi besaba ngusihlalo wamazinyo kusukela zisencane. Ngenxa yokwethuka futhi ethukile ngakho hhayi zinkulu. Kubalulekile wazi ukuthi amakhorali akubangi ukungakhululeki. You azi ukuthi ukunquma ukuthi ungenza inqubo efanele, unelungelo udokotela. Ukuze wenze lokhu, yena uhlola ngalo ingaphakathi ngomlomo. Isiguli akufanele abe kwamazinyo, ukuvuvukala, pulpitis. Uma amazinyo angaphambili kukhona alimele zivaliwe, udokotela angase enqabe ukwenza inqubo.
Ngaphezu kwalokho, kwathi sekusele izinsuku ezimbalwa mhlophe kuyinto efiselekayo lokufeza yokuhlanza amazinyo kusukela plaque kanye ekhethekile Imibhobho esemzimbeni Mint ukususwa amatshe, uma ikhona. Ngemva kwalokho ungakwazi ngokuphepha uqhubekele izinqubo eziyisisekelo. Sondeza uhlelo mhlophe, ukubuyekezwa zazo esikhathini esiningi omuhle, olwenziwa kanje:
Udokotela nge umbala umugqa ekhethekile ichaza Vita umthunzi koqweqwe lwawo nesineke futhi ukhetha umbala okufaneleka kakhulu kunokunye. Lesi sinyathelo sibaluleke kakhulu, ngoba amazinyo kumele ubukeke zemvelo.
Izindebe ikhiyiwe ngumuntu retractor.
Sibekezele ukugqoka izibuko zokuzivikela.
Izindebe, izihlathi nezinsini iphathwa ijeli, okuyinto ngokushesha osemanzi zihlangana nomoya-mpilo. Lokhu kuzokwenza ukuvikela mucosa ukusha kanye amanxeba.
Esikhathini "umongo" amazinyo, okuwukuthi smile gel endaweni isicelo. Kufanele kwenziwe ngokucophelela ukuze ingamthinti izinsini.
Okulandelayo alethwe isibani Zoom, okuzokwenza shisisa gel.
Ngemuva kwemizuzu engu-20, isixazululo ngokweqile isusiwe. Futhi inqubo iyaphindwa futhi. Ukwenza isenzo esifanayo izikhathi 3.
Ngemva kokuvalwa gel izinsalela inqubo isuswe usebenzisa ama-apharathasi ekhethekile kanye nokuqinisa isixazululo isicelo.
inqubo Kwamakhorali kobuhlungu. Ngu isikhathi kuthatha esingaphansi kwamahora angu-2.
Mhlophe Zoom, libuyekeza ikakhulukazi omuhle, zithandwa kakhulu phakathi yimpumelelo abantu, osaziwayo kanye nabezombusazwe. Yiziphi izinzuzo le ndlela?
Amazinyo lishisa ngisho nasezimweni ezinzima kakhulu, lapho ukuhwalala yawo yaholela hhayi ukuphuza ikhofi kanye ukubhema, futhi ngesizathu esihle, isibonelo, amaphilisi noma ezinye izidakamizwa.
A nomphumela emangalisa kufinyelelwa ku inqubo olulodwa.
inqubo Kwamakhorali kobuhlungu.
Ngesikhathi inqubo ithatha amahora kungekho kuka 2.
Amazinyo kungenziwa bleached-12 amathoni. On ukusebenza bokulahlekelwa kuphela indlela laser.
Umthelela okuhlala isikhathi eside (eminyakeni engaba ngu-5).
Uma umphumela onganelisekile isiguli usuphinda ngesikhathi 6 izinyanga.
Amazinyo mhlophe Zoom, izibuyekezo, izithombe, okuyinto ethulwa ngezansi - impela inqubo ethandwa. Ngenxa wakhe, abahlabeleli eziningi abadlali ezweni lethu abe ukumamatheka Hollywood.
Ingabe ikhona izingibe?
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi adunyiswe Zoom-amakhorali, okuyinto Izibuyekezo kwesinye isikhathi ngeke nomdlandla kakhulu, phela, kukhona uhlangothi okungekuhle, nibaluleke kokukhuluma. Kungase kuqashelwe:
Uma isiguli ungumnikazi koqweqwe lwawo ebucayi, noma-ke has microcracks, inqubo kungaba buhlungu.
Ngemva ukuxhumana gel mucosa we izinsini zingavela amanxeba kanye ukusha.
Ngemva mhlophe ezinye iziguli ebikwe anda izinyo ukuzwela okushisa.
Uma inqubo wawenziwa ngendlela efanele, namazinyo angase abe luhlaza nemvelo. Kulokhu, nomphumela ofiselekayo abayifunayo.
Izindleko eziphezulu zokuthola izidingo amakhorali ayikuvumeli wonke umuntu ofuna ukwenza inqubo.
Ukuze wenze uhlelo okwenzeka ngaphandle kwezinkinga, kodwa umphumela yayimangaza, kubalulekile nekuwusebentisa nakho wamazinyo.
Amazinyo mhlophe Zoom-3, okuyinto ikakhulu izibuyekezo ezinhle, umise ngokwaso iziguli hhayi kuphela, kodwa futhi ukuze ochwepheshe. Okwamanje, lokhu uhlelo olusha, kungcono ukuthi ayikho nje. Nokho enendawo Izimo. Kwamakhorali akuyona kwenziwe:
Iziguli engaphansi kwengu-18 ubudala.
Abesifazane ku "isimo ezithakazelisayo", futhi phakathi lactation. Kulezi izigaba zokuphila abakwazi Usengozini yokuthola amakhemikhali omzimba zingaba yingozi ingane.
Lapho izingxenye hypersensitive ngabanye, ikakhulukazi i-hydrogen peroxide.
Iziguli isithuthwane. Ngesikhathi inqubo, kokuquleka singenzeka.
Uma unezinkinga ngamazinyo caries, koqweqwe lwawo aqhephukile, pulpitis.
Abantu muva esabekwa lwezimpawu.
Lapho izinto zokuvimbela inzalo ngomlomo.
Uma kwenzeka ukuthi usanda esetshenziswa ehlukile mhlophe. Kulokhu, lo dokotela kumele acacise ukuthi indlela esetshenziswa wamazinyo, futhi singakanani isikhathi isidlulile kusukela kuqale inqubo kwenziwe.
Iziguli elawula ukushaya kwenhliziyo.
Mhlophe isibani Zoom, ukubuyekezwa mayelana nokuthi iziphi izinhlelo amakhasimende ushiye hhayi ncishana kubiza ruble angaba yizinkulungwane 18. Kulokhu, kuba mnene kakhulu futhi ngaphandle kobuhlungu.
Ukuze ube ukumamatheka Hollywood, akusho ukuthi ukuya ehhovisi wamazinyo. Ikhaya amazinyo mhlophe Zoom 3 izibuyekezo mayelana ukuthi, omuhle kakhulu, kungasiza kule. A inzuzo enkulu yalesi ndlela intengo. Capa Gel kuyokulahlekisela ruble akukho kuka 6-8 ayizinkulungwane. Lokhu kwenziwa ukuthi kushibhile izikhathi ezimbili kuka mhlophe emtholampilo.
abantu abaningi bebuza: "Kwenzeka kanjani Zoom amazinyo mhlophe ekhaya, ukubuyekezwa zazo zikhona omuhle?" Bonke daba ijeli akhethekile CAPAJ abanale ukugqoka on the amazinyo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukufeza umphumela oyifunayo kuyoba nzima kakhulu ngaphandle kokusebenzisa isibani UV. Umphumela kungenzeka ukuthi njengoba kulindeleke yiklayenti. Ukusebenzisa indlela efanayo mhlophe amazinyo etholwe ku 2-4 amathoni. Lokhu akwenziwa njalo ngokwanele.
Umgomo we operation ezinzima elula:
Indlu kuyadingeka ukuvula isipetu ne ijeli.
Ngemva kwalokho, ungqimba elincanyana awubeka isetshenziswa.
ngenkathi isivikela-mazinyo kuncike ekutheni uthenge ijeli. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona (Usuku White Nobusuku mbala omhlophe).
Ngemva kokukhipha ofeleba kumele kube kahle ihlanzekile emazinyweni ngomlomo ingaphakathi hashaza.
Le ndlela has nezihibe, okumele abe okukhulunywa:
Mouthguards kufanele igqoke isikhathi eside. Day - amahora 2-3 ngosuku, ubusuku - amahora 10-12.
inqubo okuphindaphindiwe. Kudingekile ukwenza ke ngeviki, futhi ngezinye izikhathi isikhathi eside.
Umphumela lilondolozwe akukho ngaphezu konyaka.
Ikhaya amakhorali Zoom 3, izibuyekezo, izithombe zazo ethulwa ngezansi, esunguliwe kahle. Inzuzo undoubted kuyinto izindleko zawo. Kulabo abafuna ekhanyisa amazinyo akho nje shades ezimbalwa, ukulingana kahle.
imithi yesimanje linikeza izinketho eziningi ukuze uthuthukise ukubukeka kwabo. Omunye wabo - i namazinyo ngempumelelo mhlophe Zoom 3, le ndlela lwempendulo sekuyisikhathi sokuba sicabangele imininingwane. Iziguli itjheje izimfanelo ezilandelayo inqubo:
Nge-awara linye nje ungathola amazinyo kahle mhlophe.
Mhlophe kusiza ngisho nasezimweni ezinzima ngendlela exakile.
Inqubo kobuhlungu ngokuphelele. ukungakhululeki Little sinikeza apharathasi ekhethekile, okuyinto fixed ngalo ingaphakathi ngomlomo.
Ngemva usebenzisa le ndlela musa sidilike amazinyo, koqweqwe lwawo luhlala luqinile.
Ngaphambi inqubo, akudingekile ukuba kudlule izivivinyo eziningi ilawulwe bamazinyo.
Ngemva kwezinsuku ezimbalwa amakhorali ungaqala ukubhema futhi ikhofi ukuphuza.
zokwelashwa ziyatholakala. Cishe zonke umtholampilo ezinkulu zamazinyo ke ongenza.
Phakathi izici ezingezinhle uzinake zamanani. Intengo Ukwelashwa impela high, ke ububanzi ruble 18 kuya kwezingu-22. Ngiyavuma, lokhu bonke angaba namandla okuwunikela. Kulokhu, eziningi ezifuywayo Sondeza mhlophe isetshenziswa. Ukubuyekeza, izithombe aboniswa ngezansi.
Iziguli uqaphele yizinhlobonhlobo le ndlela. Standing gel ayibizi, futhi ingafinyelela umphumela oyifunayo esikhathini esingaphansi kwesonto. Sithanda ukwazi ukuthi ezimweni ezinzima lapho amazinyo mnyama ngokusebenzisa izidakamizwa, le ndlela akusebenzi. Lokhu kungabonakala kulokho abakuzwa ngokuqondene abantu baxoxa mhlophe uhlelo Sondeza.
Kodwa uma ufuna ekhanyisa amazinyo akho shades eziningana, ukusetshenziswa ijeli ekhaya ngempela kuthethelelwe.
Ngaphezu kwalokho, kuyazuzisa ukukhumbula ukuthi uma amazinyo ziyobhekana amakhorali, aqukethe ofakwe, kumele zithathelwe indawo bona. Okokuqala, i-hydrogen peroxide kungalimaza ezibonakalayo, nje uwela ngaphandle. Okwesibili, uphawu hhayi ucaciswa, futhi wahlala nombala ofanayo. Ukuze amazinyo kwakungekho Ngokuphambene, indlela engcono kakhulu - ukubeka entsha impahla ukugcwaliswa, okuyinto, futhi, izindleko zezimali. Kodwa le nqubo akugcini. Amazinyo uqale mnyama kanye nesikhathi ofakwe asemhlophe. Sizoba ukuqala lonke futhi.
Ngezinye izikhathi ungase ubone impendulo engeyinhle kwesokunxele iziguli ukuthi baye baphendukela amazinyo ngendlela ephambene neyemvelo ezimhlophe, frosted. Lokhu kubonisa ukuntula ikhono noma ukungabi nalwazi odokotela. Uma kwamazinyo namabala amhlophe, okuyinto eshiwo ngokucacile, akufanele ukucasula ngosuku lokuqala. Ngokuhamba kwesikhathi, konke kuyoba. Lokhu kwenzeka ngoba koqweqwe lwawo is overdried futhi equliswa ithonya ezishisayo.
Yini odinga ukukwazi ukuze ulondoloze nomphumela ofiselekayo?
Odokotela bathi umphumela Zoom-mhlophe ihlala iminyaka engu-2. Lokhu kuyiqiniso, uma zonke izidingo inqubo. Phakathi kwabo:
Eyokuqala izinsuku 2 ukuhambisana "Ukudla emhlophe".
Phakathi namahora angu-48 ukuba bayeke ukubhema, ikhofi, isoso, berry ophaya, itiye, Cola, imifino, usoso wesoya.
Sebenzisa toothpastes, okuhlanganisa sasekhaya.
Njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, vakashela Ihhovisi zamazinyo. Yenza amazinyo yokuhlanza.
Odokotela bamazinyo zisebenzisa izindikimba postprandial.
Phakathi nesonto lokuqala alidle izitsha abandayo kakhulu noma kushisa.
Ukufeza zonke lezi zincomo kungaba ezimi njalo mhlophe umphumela.
Sondeza-amakhorali, okuyinto libuyekeza futhi ube engemihle futhi omuhle, kuyinto eseyintsha emakethe Russian. Ochwepheshe abaningi aveze yizinhlobonhlobo nokuphepha le ndlela. Ukuncintisana naye can kuphela laser mhlophe. Abaningi uqaphele okusezingeni eliphezulu kahle Sondeza uhlelo. Ngemva kwehora, isiguli uthola umphumela olulindelekile. Nalapha futhi, kubalulekile ukuba sifeze inqubo emtholampilo, okuyinto has isipiliyoni nale gel. Kungenjalo, namazinyo Kungenzeka luhlaza nemvelo.
Caries zamazinyo - Izimpawu, Izimbangela, Izinhlobo
I-Casserole I-egg kuhhavini: iresiphi ngesithombe
Recipe Pike eyayigcwele: le nhlanzi toothy Ungase futhi ibe mnene